Mareykanka oo ciidamo u diraya Suuriya si ay gacan uga gaystaan in Raqqa laga qabsado IS - BBC Somali
Image caption Dagaalyahanada Kurdiyiinta iyo Carabta Sunniyiinta ayaa weerrar ay ku qaaday magaalada Raqqa si ay uga qabsadaan IS
Mareykanka ayaa sheegay inuu ciidammo kale oo tiradoodu dhan tahay 200 u dirayo dalka Suuriya si ay ula dagaallamaan kooxda sheegata Dowladda Islaamka.
Xoghayaha gaashaandhigga Mareykanka, Ash Carter, oo ka hadlay shir jaraa'id oo ka dhacay dalka Baxreyn, ayaa sheegay in ciidammada dheeraadka ah ay gacan siin doonaan xoogagga gudaha ee dagaalka ugu jira sidii dib loogu qaban lahaa magaalada Raqqa.
Magaalada Raqqa ayaa ah magaalada ay kooxda jihaad-doonka ee sheegata Dowladda Islaamka ku sheegaan inay tahay caasimadda khaliifadooda.
Isagoo ka hadlayey wadahadallada ammaanka ee Bariga Dhexe ayaa Xoghayaha difaaca wuxuu sheegay in askarta ay isugu jiraan kuwa sida gaarka ah u tababaran, tababareyaal, la taliyeyaal, iyo kooxaha bambooyinka kala furfura.
Waxay ku biiri doonaan 300 oo askari oo ah kuwa sida gaarka ah u tababaran oo horeba Suuriya u sii joogay.
Bishii hore ayaa dagaallameyaal Kurdiyiin iyo Carab isugu jira oo ka mid ah xulafada uu Mareykanku hoggaamiyo waxay sheegeen inay billaabeen hawlgal ay ku qabsanayaan Raqqa.